မိန်းကလေးတစ်ဦး Chattingရည်းစား၏ အဓ္ဓမပြုကျင့်ခြင်းခံရ | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » News » မိန်းကလေးတစ်ဦး Chattingရည်းစား၏ အဓ္ဓမပြုကျင့်ခြင်းခံရ
မိန်းကလေးတစ်ဦး Chattingရည်းစား၏ အဓ္ဓမပြုကျင့်ခြင်းခံရ
Posted by search123 on Oct 16, 2010 in News | 16 comments
သင်္ကန်းကျွန်းမြို့နယ်နေ အသက် ၂၀ နှစ်အရွယ် အမျိုးသမီးတစ်ဦး Chatting မှ ရီးစားရပြီး ချိန်းခေါ် အဓ္ဓမပြုကျင့်ခံရလို့ ရဲစခန်းတိုင်
သင်္ကန်းကျွန်း မြို့နယ်နေ အသက် ၂၀ နှစ် အရွယ်ရှိ အမျိုးသမီးတစ်ဦးသည
် Online Chatting မှတဆင့် ပုဇွန်တောင်မြို့နယ်နေ အသက် ၂၈ နှစ် အရွယ်ရှိ အမျိုးသားလေး တစ်ဦးနှင့် ချစ်သူ ဖြစ်သွားကြပြီး အမျိုးသားလေး၏ ချိန်းဆို ကမ်းလှမ်းမှုအရ ၂၁.၈.၂၀၁၀ ရက်နေ့တွင် ချိန်းဆိုရာ ကန်တော်ကြီးစောင်းရှိ ကော်ဖီဆိုင်သို့ နေ့လည် ၁ နာရီအချိန်က သွားရောက် တွေ့ဆုံခဲ့ကြသည် ဟူ၏။
နှစ်ယောက်အတူ တွေ့ဆုံကြပြီး အအေးသောက်နေစဉ် အမျိုးသမီးလေးမှာ အအေးသောက်လက်စမှ မူးဝေ လာသဖြင့် အမျိုးသားလေးက အိမ်ပြန်ပို့ပေးမည် ဆိုပြီး မည်သည့်နေရာ ခေါ်သွားနေမှန်းမသိဘဲ လိုက်ပါသွားခဲ့သည် ဟူ၏။
အမူးပြေစဉ် သတိရလာသော အခါ တိုက်ခန်းကျဉ်း တစ်ခုအတွင်းရှိ အိပ်ယာပေါ်တွင် ခေါ်ဆောင်လာသူ အမျိုးသားလေးနှင့် အတူရှိနေပြီး သားမယားအဖြစ် ပြုကျင့်နေရာ ငြင်းဆန် ရုန်းကန်သော်လည်း ခေါင်းမူးသည်က တစ်ဖက်၊ အားချင်း မမျှသည်က တစ်ကြောင်း တို့ကြောင့် ရုန်းကန်ရင်းပင် မူးပြီး အိပ်ပျော် သွားခဲ့သည် ဟူ၏။
နောက်တစ်နေ့ နံနက် ၇ နာရီ အိပ်ယာနိုးချိန်ရောက်မှ သူမရောက်နေသော နေရာသည် အမျိုးသားလေး၏ အိမ်မှန်း သိလိုက်ရပြီး သူမ၏ အိမ်သို့ ပြန်လာပြီး မိဘများကို ပြောပြသဖြင့် မိဘများက ၂၆.၈.၂၀၁၀ နေ့တွင် ပုဇွန်တောင် ရဲစခန်းသို့ အမှုဖွင့် တိုင်ကြားခဲ့ကြောင်းနှင့် ရဲစခန်းမှ (ပ) ၂၆၄/၂၀၁၀ ပြစ်မှုပုဒ်မ ၃၇၆ အရ အမှုဖွင့်ပြီး ပြစ်မှု ကျူးလွန်သူ အမျိုးသားအား ဖမ်းဆီး စစ်ဆေးလျက် ရှိနေကြောင်း မှုခင်းသတင်း ဂျာနယ်အရ သိရသည်။
(Forward Mail ကနေ ရတဲ့ သတင်းလေး တစ်ပုဒ် ပါ)
သူတို့လုပ်တာနဲ့ တခြားကောင်မလေးတွေတောင်မပြင်မှာချိန်းရင်လာတော့မှာမဟုတ်ဘူး….။တွေ့ ရုံမတွေ့ ပဲနဲ့ ကွာ..။
ခွေးမသား….မင်းလုပ်တာနဲ့ ငါလည်းonline ပေါ်မှာရည်းစားရတော့မှာမဟုတ်ဘူး…။အိုက်ကောင်ဘယ်သူလဲ…
စိတ်လျှော့ ကိုယ့်လူ စိတ်လျှော့ ..တရား ဥပဒေက အရေးယူ သွားလိုက်မယ့်…
စိတ်လျှော့ ကိုယ့်လူ စိတ်လျှော့ ..တရား ဥပဒေက အရေးယူ သွားလိုက်မယ်…
တော်တော် နှမချင်းမစာနာတဲ့လူ…သူ့မှာ နှမ မရှိဘူးနဲ့တူတယ်…
Mr Cat ဘယ့်နှယ်ကြောင့် သူများ ဆွေမျိုးတွေကို ပြဿနာ ရှာနေရတာတုန်း
ယောက်ျားလေးက နဂိုလ် ကတည်းကကြိုတင်ကြံစည်
မှုဘဲ မဟုတ်ရင် အချိုရည်ထဲထည့်တဲ့ဆေးဘယ်ကရ
သတင်းတခုမှာ ဖတ်ရတာတော့ အဲဒီ ကောင်လေးနဲ့ ချက်ထဲမှာ ချစ်သူတွေ ဖြစ်ပြီးသား အပြင်မှာ တွေ့ဖို့ ပထမဆုံး ချိန်းဆိုတုန်း လုပ်တာလို့ ဖတ်လိုက်ရတယ်။ ဒါနဲ့ အဲဒီ အမျိုးသား အခန်းရောက်နေရာက နိုးတယ် ဆိုတော့.. ကောင်မလေးကို လက်ထပ်လိုက်ရင် ဒီ ကိစ္စ ပြေလည်သွားမယ် ထင်တယ်..
online မှာ ရည်းစားဖြစ်ပြီး အပြင်မှာတွေ့တိုင်း ဒီလိုဖြစ်တာတော့ မဟုတ်ပါဘူး၊ ယုတ်မာတဲ့စိတ်ရှိသူကတော့ ယုတ်မာတာပဲလေ… ကောင်မလေး အနေအထားက အရမ်းလန်းနေလို့ အရကြံလိုက်တာလဲ ဖြစ်နိုင်ပါတယ်… ဘာပဲပြောပြော အားမပေးပါဘူး၊ ယောက်ျား သိက္ခာကျတယ်… တရားသောနည်းလမ်းနဲ့ ရအောင် ကြိုးစားသူကိုပဲ အားပေးပါတယ်…
အွန်လိုင်းတောင် အလွတ်မပေးကြတော့ဘူးလား…. တဏှာရူးရ
တောက် … လူ မဆန် တဲ. ကောင် ကွာ … online ကို အလွဲ သုံး စား လုပ် သွား တယ် …. ငါ တို. တော. ဝေး ပြီ .. ရည် စား ရဖို. .. အ စော ကြီး က တဲ. က မ ရုပ် က ဆိုး ပါ တယ် ဆို ။ အ ဟင်းးး အ ဟင်းးး
တော်တော်လေးကို အကြံပက်စက်လွန်းတယ် … ခု ဘယ်လိုဖြစ်သွားပြီလဲ …
ငါ့မှာ နှမ မရှိတာတောင် အတော်လေးတင်းနေပြီး………ရှိများရှိလို့ကတော့ အဲဒီကောင်ကို ဒီအတိုင်းမထားဖူး……..ဘယ်လိုဖြစ်သွားပြီလဲ အခု သိ၇င် ပြောပေးပါဦး………….
ကြောက်ကြောက် .. မိန်းလေးက . ယောက်ျားလေး အဓ္ဓမ အပြုခံရရင် တိုင်လို့ရသေးတယ် ..
အနော်တို့ ယောက်ျားလေးတွေ မိန်းလေးရဲ့ အဓ္ဓမ အပြုခံရရင် ဘယ်လိုတိုင်ရ မလဲ နော် ..
နောက်တခါချက်တင် အပြင်မှာ တွေ့ဖို့ခေါ်ရင် မသွားတော့ဘူး .. အဟဲ ..